Kenya oo ku dhowaaqday inaysan aqbali doonin go’aanka maxkamadda ICJ ee kiiska badda Soomaaliya | Goojacade
Home War Kenya oo ku dhowaaqday inaysan aqbali doonin go’aanka maxkamadda ICJ ee kiiska...
Kenya oo ku dhowaaqday inaysan aqbali doonin go’aanka maxkamadda ICJ ee kiiska badda Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa ku dhowaaqday inaysan aqbali doonin, islamarkaana ixtiraami doonin go’aan kasta oo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ka gaarto kiiska badda Soomaaliya, sida ku cad dokumenti qarsoodi ah oo uu helay wargeyska The Standard ee Nairobi.
Kenya ayaa dalbaneysa in marka hore Soomaaliya iyo Kenya uu dhex-dhexaadiyo ururka Bariga Afrika ee EAC (East Africa Community), kadibna haddii wada-hadalladaas aan xal lagu gaarin ay mar labaad yeeshaan wada-hadallo uu dhex-dhexaadiyo ururka Midowga Afrika, markaas kadib un loo gudbo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda.
“Maxaysan Soomaaliya xal uga raadin Midowga Afrika, miyaanay IGAD u furneyn Soomaaliya inay kiiskeeda u gudbiso, ka waran ururka EAC?” ayaa lagu yiri qoraalka dowladda Kenya ay sida qarsoodiga ah u diyaarisay.
Kenya ayaa sidoo kale ku dooday in ururka QM ee badaha ee UNCLOS uu dalbanayo in dhinacyada is-haya ay marka hore isku dayaan inay murankooda ku xaliyaan habab kale, ka hor inta aysan u gudbin maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda.
Dokumentigan ayaa Kenya ay ku eedeysay Soomaaliya inay iska indha-tireyso sida ay Afrikaanka wax u xalistaan.
“Soomaaliya waxay cayaareysa kaar jinsi, ayada oo Afrikanka ka doorbideysa hab sharciyeedka Yurub. Sidaas darteed maxay noqon kartaa cawaaqibka haddii ICJ ay u hiiliso Soomaalida” ayaa lagu yiri qoraalka Kenya.
Previous articleDaawo Wadahadalo u socday Xisbiyadda Kulmiye iyo Waddani oo fashilmay
Next articleCiidamada DF oo gacanta ku dhigay BOOYADII ugu weyneyd oo qarax lagu diyaariyey